के थियो, के छ, के हुनुपर्ला ? | Aaja ko Shiksha
के थियो, के छ, के हुनुपर्ला ?
‘कुकुरले मान्छे टोके स्वाभाभिक हुन्छ । मान्छेले कुकुर टोके समाचार बन्छ ।’ उठानी दिनमा यस्तै कुरा आए । शैक्षिक छिद्रान्वेषी । अपेक्षा थियो–छिद्र देखाएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले प्वाल टाल्छन् । अनुभबले भन्यो–थेत्तरको प्वाल रहेछ । प्वाल पार्नेले बुझेछन्–‘हात्ती हिँडिरहन्छ । कुकुर भुकिरहन्छ ।’ यो प्रत्याभूतिले पत्रकारको चिन्तन फेरियो । राम्रो कुरा खोज्ने । खोज पत्रकारिताको यो बदलिँदो शैलीले काम गर्यो । पत्रिका (आजको शिक्षा)लाई ‘राम्रो गर्नेको हाम्रो’ बनायो । हाम्रोपनाको खोजीले पत्रिकालाई तत्कालै सबैको घरदैलोमा पुर्याउने सोंच बन्यो । पत्रकारहरु त्यसैमा लागे । अनलाइन प्रकाशन । अनलाइन प्रकाशनलाई अनलाइन सन्देशले सघायो । राम्रो गर्नेहरुका समाचारहरु स्वस्फूर्त आउन थाले । अहिले पत्रिका छापामा छ । अनलाइनमा छ । निःशुल्क अनलाइन । सशुल्क छापा । शुल्क तिरिदिने दाताहरु जन्मिए । विज्ञापन दिनेहरु जन्मिए । संस्करण किनिदिनेहरु जन्मिए । परिणामतः पत्रिका टिक्यो । पत्रकारहरुको मेहनतले । पढनेहरुको विश्वासले । दानदातब्यले । सम्बन्धले ।
पत्रिका टिकेको छ । बिकेको छ । विश्वास कमाएको छ । पत्रकारहरु अनवरत खटेका छन् । परिणामतः पत्रिकामा सुखद समाचारको ओइरो छ । दुःखद समाचार पनि छ । समसामयिक विचार छ । शिक्षाका । शिक्षणका । मूल्याङ्कनका । नीतिका । नियमावलीका । जानकारीका । चित्रात्मक अभिव्यक्तिका । सरकारी अलमलका । अलमलले निम्त्याएका परिणामका । यसरी हेर्दा पत्रिकाले खट्टा मिठाको काम गरेको छ । मिठा खोज्नेलाई मिठा दिएर । खट्टा खोज्नेलाई खट्टा दिएर । खट्टामिठा खोज्नेलाई खट्टामिठा नै दिएर । स्वदेशका । विदेशका ।
अहिलेका पत्रिकाहरु एकलकाटे छन् । आफैंमा पूर्ण हुन खोज्ने । भोलिका पत्रिकाले ‘रेफरल’ हुनु पर्छ । यति कुरा मेरोमा पढ्यौ थप त्यहाँ पढ भन्ने । मैले यो दृष्टिकोणले लेखेँ । अर्काे दृष्टिकोणको कुरा त्यहाँ पढ भन्ने । फेरिएका पाठकहरुलाई सन्तुष्ट बनाउने ।
एउटै विषयमा बहु प्रस्तुतिले पाठकहरु वाक्क छन् । ठीक खोज्ने पाठकहरु अलमल्ल छन् । त्यसैले दृष्टिकोणीय ठीकबाट भोलिको पत्रकार दृष्टिकोणीय विश्लेषणमा जानु पर्छ । बहु दृष्टिकोणबाट एउटा सत्यमा पुग्नु पर्छ । जहाँ पढे पनि त्यही सत्यमा । भोलिको व्यस्त पाठकले त्यो कुरा खोज्छ ।
हिजो र आजका कमै पत्रिकाले लिखित स्रोत दिए । भोलिका पत्रिकाले अनुसन्धानात्मक शैली अपनाउनु पर्छ । भन्नुभयो को ठाउँमा लेख्नुभयो भनेर । लेखेको र भनेकोमा यो फरक छ भनेर । गरेकोमा त झनै फरक छ भनेर । समानता छ भनेर । त्यो पनि किटानी तबरमा । यो शैलीले लेखनीलाई दह्रिलो बनाउँछ ।
भोलिको पत्रकार बहुविधाको लागि हुनु पर्छ । छापामा । भाइवरमा । फेसबुकमा । यूट्यूबमा । अनलाइनमा । पैसा तिराउनेगरी सबै पढनेलाई । निःशुल्कमा सार पढ्नेलाई ।
नराम्रो सुधार्ने उपाय हुनु पर्छ भोलिको पत्रिकामा । राम्रो कुरा बिस्तारित गर्ने तरिका हुनु पर्छ त्यहाँ । सन्देशले । सन्दर्भले । सम्भावनाले । अन्य कुनै तरिकाले ।
भोलिका पाठक विशिष्टिकृत हुन्छन् । शिक्षणका । मूल्याङ्कनका । विषयवस्तुका । त्यसैले पत्रिकामा भन्नुपर्छ मूल्याङ्कन खोजे अनलाइन पढ । विषयवस्तु खोजे यूट्यूब पढ । चित्रात्मक कुरा खोजे फेसबुक पढ । संस्करण त्यही हो । प्रकाशक त्यही हो । अङ्क त्यही हो ।
सम्भावना खोजाउनु पत्रकारको जिम्मेवारी बन्नु पर्छ भोलिका दिनमा । गरेका ठाउँको नमूना दिएर । विज्ञहरुको सोंच दिएर । गरेर हेर्नुस् न त भन्ने सन्देश दिएर । क्रमशः पत्रकारले अघोषित तालिमकर्ता बन्नु पर्छ । तालिम किन्न नसक्नेहरुलाई सघाउनु पर्छ पत्रकारले । किनकि, भोलिको पाठक यान्त्रिक बन्दैछ । पठन संस्कृति बदलिँदैछ । त्यसैले बोल्ने, हेर्ने र अनुभूति गर्ने पत्रिका चाहिन्छ भोलिका पाठकलाई । अन्यथा, आजको शिक्षा हिजोको आज बन्न पुग्छ । आजको आजमै रम्नुपर्ने हुन्छ । भोलिको आजमा नपुग्ने डर हुन्छ ।